HALKAAN KA AKHRISO-WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AHAXAD 18-KA OKTOOBAR 2020-KA
Sunday October 18, 2020 - 10:11:54 in Wararka by Mogadishu Times
WARARKII UGU DAMBEEYEY EE MAGICAA BISTA G/WASIIRADA XARUNTA VILLA SOOMAALIYA EE M/MUQDISHO waxaa ka socda wada-tashi yadii ugu dambeeyey ee magacaabista G/wasiirada cusub ee XFS R/wasaare Max amed Xus een Rooble Warar ka ayaa sheega ya in xalay ma
WARARKII UGU DAMBEEYEY EE MAGICAA BISTA G/WASIIRADA XARUNTA VILLA SOOMAALIYA EE M/MUQDISHO waxaa ka socda wada-tashi yadii ugu dambeeyey ee magacaabista G/wasiirada cusub ee XFS R/wasaare Max amed Xus een Rooble Warar ka ayaa sheega ya in xalay markale ay kulan 3da geesood ah yeesheen madaxewe ynaha, R/wasaaraha & guddoomiyaha G/Shacabka, waxaana kul ankaas looga hadlay dhismaha xukuuma dda cusub ee F/ Soomaaliya. Ilo ku dhow kulankaasi oo saacado ba dan qaatay ayaa Warbaahinta u sheegay inuu ku soo dhammaaday is-afgarad, wu xuuna ahaa mid ay albaabada u xiran yih iin. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku da raya in saacadaha soo socda si rasmi ah loogu dha waaqi doono liiska golaha was iirada oo la hor geyn doono golaha sha cabka. Xogta aan helnay ayaa sidoo kale she egey sa in wasiirada la soo magacaabi do ono ay is ugu jiraan qaar ka mid ah xuk uumaddii R/wasaare Khayre iyo kuwa cusub. Dad badan ayaa isha ku haya dhisma ha G/xukuumadda oo ay maalmo ku qa adatay Ro oble oo codka kalsoonida horey uga helay B/F/ Soomaaliya XFS ee uu hoggaaminayo, Md.Max amed Xuseen Rooble ayaa waxaa horya alla shaqoo yin adag oo ay ugu horreyso doorashada soo socota ee 2020/21.
PUNTLAND OO TOOGASHO KU FILISAY NIN SI ARXAN DARRO AH U DILAY HOOYADIIS
Maxkamadda sare ee D/goboleedka Pun tland ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay Faa rax Cabdi Caagane oo lagu eedeeyey inuu ho rey si arxan darro ah ugu dilay hooyadiis oo la gu magacaabi jir ay, Xaawo Jaamac Cabdulle.
Toogashada ayaa ka dhacday bartam aha Garoowe, waxaana goobta ku sugnaa ehellada marxuumadda, saraakiil ka tirsan maxka madda iyo ciidamada ammaanka Puntland.
Maxkamadda ayaa sheegtay in Caa gane lagu helay dambiga dilka ah ee lagu soo eede eyey, islamarkaana lagu xuk umay dil, kaas oo maanta lagu fuliyey.
Dhacdada dilka ah ee uu hooyadiis u gey stay, Faarax Cabdi Caagane ayaa saddex bil ka hor ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Jalam oo ka tirsan gobolka Nuugaal.Ciidamada ammaanka ayaa fal kaasi argagaxa leh, kadib gacanta ku soo dhigay eedeysanaha oo la horgeeyey maxkamadda, si cadaaladda loo marsiiyo, iyada oo ugu dambeyn maanta la geeyey tiirka, islamarkaana la toogtay, kadib xu kunkii lagu riday.
Dadka deegaanka iyo ehelllada AUN marxuumad Xaawo Jaamac Cabdulle ay aa soo dhoweeyey go’aanka maxkamad da iyo toogashada lagu fuliyey eedeysana ha oo si arxan darro ah u dilay hooyadiis, falkaas oo argagax iyo la yaab ku noqday dad badan.
sii hayaha Wasiirka Maaliyadda ee Xu kuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdir axmaan Ducaale Beyle ayaa Aaladda fo gaan aragga uga qeyb galay shirka sa nadlaha ah ee Bangiga Adduunka oo loo ga hadlayay isbadalka dhaqaalaha iyo saa meynta COVID-19.
War qoraal ah oo uu Wasiir Beyle bar tiisa Twitter-ka ku soo qoray ayuu ku shee gay in madaxda shir ka ka soo qeyb ga shay uu la wadaag ay isbadalka maali yadeed ee dalka iyo saameynta uu cudurka Koroona ku yee shay dhaqaalaha Soomaaliya.
"Waxa aan ka qeyb galay shirka sanad laha ah ee Bangiga Adduunka iyo Soo maaliya oo aan uga hadalnay isbadalka Maaliyadda, Dhammeystirka qorshayaa sha lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo sa ameynta Koroona ku yeeshay Soomaali ya”. Ayuu yiri Wasiir Beyle.
Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa uga mahadceliyay Ma daxweyne ku xigeenka Bangiga Adduunka ee Afrika Hafez Ghanem iyo taageerada uu Bangiga Aduunka siiyo Soomaaliya.
"Waxaan Bangiga Aduunka uga mahad celineynaa taageerada dhanka dadaallada dib u habeynta dhaqaalaha iyo xoojinta ka jawaab celinta saameynta cudurka Karoo na Feyris” Ayuu yiri Wasiir Beyle.
Dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay cilad dhanka fars amada ah oo manta ku timid qadka Internet ka Soomaali ya, taasoo sababt ay in qaar ka mid ah Shirkaddihii bix in jiray Internet ka maanta ay san manta shaqeyn.Wasiirka Boostada iyo Isgarsiinta xukuumadda Soo maaliya ENG Cabdi Canshuur Xasan ay aa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku howlantahay xalinta cilada.
War kasoo baxay Wasiir Canshuur ayaa Sidaan u qornaa: Iyada oo laga jawaaba yo baaqii dowladda ee ahaa in dalku yeesho xargo badan oo Internetka soo gel iya dalka, ayaa waxa aan ugu bishaarayn aynaa dadweynaha Soomaaliyeed in uu shaqo bilaabay Khadka Xarrigga Internet ka ee DARE1 (Djibouti Africa Regional Ex press 1) oo noqonaya xarriggii labaad ee Internet ee magaaladda Muqdisho ka howlgala; Xarriggan cusub ayaa waxa aan rajaynaynaa in uu xoojin fiican u noqon do ono xariggii hore ee Internet ee ka shaqe ynayey magaalada
Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta & Tiknolojiyadda waxa ay uga mahadcelina ysaa Shirkadda SOMTEL oo degdeg uga jawaabtey baaqii dowladda ee ahaa hel itaanka xarrigga labbaad ee magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaa dalka soo gaarey oo howl bilaabay Markabkii xalin lahaa cillad dii hore ee ku dhacday xariggii 1-aad ee Internet-ka ee Eastern Africa Submarine Cable System (EASSy) ee Shirkadda DAL KOM, taariikhdu markii ay ahayd 26 July 2020, Kooxda farsamada ee la socota mar kabkan ayaa waxa ay howshooda ku soo gebogabeyn doonaan muddo kooban, ta as oo aan ka warhayno in ay cirriiri gelin doonto isticmaalka Internet-ka ee xarr iggaas mudadaas kooban.
WHO OO AFRIKA UGA DIGTAY MOWJAD LABAAD OO COVID-19 AH
Ururka Caafimaadka Adduunka ee (WHO) ayaa ka digay in Afrika aysan xa mili karin mowjad labaad oo COVID-19 ah, iyadoo sheegtay in ay taasi saameyn bal laaran ku yeelan karto dhaqaalaha qaaradda.
Digniintan ayaa imaan eysa iyadoo ay sare u kaceen kiis aska fayras ka dalal badan oo dho waan khafiifiyay xayiraa daha.
WHO ayaa sheegtay in fayraska uu no qon doono mid aan la xakameyn karin had dii dalalka Afrika ay sii wadaan khafiifinta xayiraadaha iyagoo aan meel dhigin qor sheyaal looga hortagayo xanuunka.
Agaaismaha WHO ee Afrika, Matshidiso Moeti, ayaa sidoo kale sheegtay in qaarad da ay qeybteeda heli doonto haddii la soo saaro tallaalka fayraska.
Afrika waxaa laga soo sheegay in ka ba dan 1.6 milyan oo kiisaska coronavirus ah tan iyo intii uu xanuunku dillaacay, iyadoo in ka badan 39,000 oo qof ay u dhinteen.
SOOMAALIYA IYO TALYAANIGA OO KALA SAXII XD AY HESHIS LAGU FULINAYO MASHRUC MUHIIM AH
Dowladda Federaalka Soomaaliya a yaa maanta dowladda Talyaaniga la sax iixatay mashruuc lagu dhisayo Biyo xireen ka magaalada Beledweyne, oo ku kacaya malaayiin dollar.
Mashruucan ayaa isu gu jira dhisme biyo xir een, dayactirka Jiinka iyo kanaala da wabiga, si loo yareeyo khatarta fataha ad ee wabiga Shabelle ku sameeyo M/ Bel edweyne iyo beeraleyda ku xeer an.
Saxiixa heshiiskan oo uu goobjoog ka ahaa siihayaha R/Wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa Dowladda Soomaaliya u xii xay siihayaha Wasiirka Beeraha Siciid Xus een Ciid, halka Dowladda Talyaanigana u saxiixay Safiirkooda Alberto Vecchi iyo Ma daxa Hay’adda horumarinta Talyaaniga Guglielmo Giordano.
Mashruucan ayaa waxaa ku baxaya lix Milyan oo Euro, waxuna isugu jiraa sadd ex qeybood oo kala ah, dhismaha biyo-xir eeno, dayactirka kanaalada iyo tayeynta hay’adaha qaabilsan fatahaadaha.
Sii-hayaha Wasiirka Beeraha ayaa she egay mashruucani in uu yahay mid ahmi yad weyn u leh deegaannada uu maro wabiga Shabelle oo geysta fatahaado sab aba dhimasho iyo burbur hantiyeed, isa goo uga mahadceliyey dowladda Talyaan iga taageerada ay la garab taagan tahay.
Mashruucan oo ahaa in la fuliyo hor aantii sanadkii tegay ayaa baaqday kadib markii dowladda Soomaaliya ay soo dal ban weyday.
Wargeyska La República ee Talyaani ga ayaa bishii November 2019 qoray war bixin, ay soo xigatay Caasimada Online, oo uu ku sheegay in lacag 6 milyan oo dol lar ah oo loogu talo-galay in lagu dhiso bi yo xireeno ka hortagi karay fatahaadda webiga Shabelle uu ka sameeyey qeybo ka mid ah maamulka HirShabelle dib loo celiyey markii dowladda Soomaaliya ay soo gubin weysay soo-jeedinta mashruu ca.
Xeebaha Puntland gaar ahaan gobol ka Bari ayaa lagu arkayaa Doonyaha & Maraakiibtii Jariif ee ugu badnaa kuwaas oo guranaya Kheyraadka Badda.
Maraakiib waaweyn oo laga leyahay dalal shisheeye ayaa bilaabay inay xaaluf xoogan ku sameeyaan kalluunkii yaaley xeebaha gobolka Gardafuu, waxaana dur ba cabasho xoogan ka muujinaya kalluu maysatada iyo shacabka kunool gobolk aasi.
Xeebaha degaanada Gumbax iyo Bar eeda ayaa kamid ah meelaha jariifka ugu ba’an laga soo sheegayo, waxaana arrin taas cabasho xooggan ka muujiyay Kallu umeystada Degaanka.
Xaalufkaan ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan ay baddu furantay isla marka ana kalluumaysatada gobolkaasi ay ga shay rajada inay ka faa’iidaystaan kalluun ka badda ku dhashay mudadii baddu xirn ayd guud ahaan deegaamada Puntland.
Sidoo kale, Kalluumeysatada ayaa xu kuumad da Puntland ku eedeeyay in ay ru khsad siisay doonyaha jariifka qaarkood, islamarkaana ay lacag ka sameeyaan mas ’uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland.
Maxay Kenya ka tiri qorshaha Mareykanka ciidamadiisa u gala baxayo Soomaaliya?
Wasiirka Arrimaha Dibadda Sucuu diga Feysal Bin Farxaan ayaa si maldahan u tilmaamay suurtagalnimada in xal laga gaaro khilaafka saddex sano jirsaday ee dalkiisa kala dhexeeya dalka Qadar kadib kulan uu magaalada Washington kula yee shay Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mar eykanka Mike Pompeo.
Sanadkii 2017-kii Sucuudi Carabiya oo ay wehlinayaan dalalka Isutagga Imaar aadka Carabta, Baxreyn iyo Masar ayaa xiriirkii diblumaasiyadeed iyo midkii ganac siba u jaray dalka shidaalka hodanka ku ah ee Qadar iyaga oo ku soo rogay cuna qabateyndhanka cirka,badda iyo dhulkaah
"Waxaa inaga go’an inaynu xalka hel no, waxaan sii wadeynaa u diyaar garow ga la shaqeynta walaalaheenna Qadar, waxaana rajeynayaa in iyaguna si dhab uga go’an tahay” ayuu yiri Feysal Bin Far xaan oo ka hadlay doodwadaag uu soo qa banqaabiyay Machadka dhanka daraasad da ah oo ku yaalla Washington.Wasiir Feysal Bin Farxaan ayaa intaas ku daray in ay muhiim tahay in xal loo helo cabsida dhanka amniga ah ee ay qabaan xulufada afargeesoodka ah.
"Haddii aynu helno dhabbo looga gud bayo cabsida dhanka amniga ee nagu riix day qaadashada aynu qaadanay, waxaan fila yaa in ay taasi war wanaagsan u noq on doonto gobolka oo dhan” ayuu yiri Was iirka Arrimaha Dibadda Sucuudiga Feysan Bin Farxaan.
Afarta Wadan ee xayiraadda saaray Qadar ayaa ku eedeeyay in ay taageerto "Argagaxisada” sidoo kalena ay xiriir dhow la leedahay dalka ay afartaasi dal xifaalta maan ee Iiraan. Dowladda Qadar ayaa si adag u beenisay eedeyntaasi.
QARAMADA MIDOOBEY: AL-SHABAAB SANA DKII $3 MILYAN OO CANSHUUR AH AYEY KA QAADAAN DEKADDA
Warbixin ay soo saareen khubaro ka tirsan qaramada midoobey ayaa lagu shee gay in xarakada Al-shabaab ay $3 milyan oo canshuur ah sanadkii ka hesho deka dda magaalada Muqdisho.
Warbixin oo la hordhigay golaha ammaan ka ee qaramada midoobey waxaa ku xus an in akoon Al-shabaab uga furan mid ka mid ah bangiyada Muqdisho ay ugu dhac aan canshuurta iyo zakawaadka. 4-tii bil ee lasoo dhaafay waxaa la dhigay $1, 198,933, lacagtaas oo loo dhigay qaab Mo bil ah, si cash ah ama xawaalad.
Sida ku qoran warbixinta, Al-shabaab oo ka faa’ideysaneysa awood darida hey’ adaha maaliyadeed ee dalka ka jira ayaa June keliya waxaa ay Mobil-ka lacagta la isugu diro ku heshay $50,000 halka ako onada kale lacag ka timid lagu qiyaasay ilaa $1 million, lacagtaas waxaa bixiyey ganacsatada dekadda, kuwa maraakiibta soo rarta iyo gawaarida xamuulka ah.
Dhanka kale, sida UNKa ay sheegaya an Al-shabaab waxaa ay Zakawaat ka qaa daan ganacsatada iyo goobaha iyaga oo May ilaa bartihii July ee sanadkan helay la cag dhan $1.7 million hal qof ayaa bixiyey $300,000.
Waxaa isla warbixinta la horgeeyey golaha ammaanka ku jirta in Al-shabaab ay lacag canshuur ah ka qaadaan ganacs atada Kismaayo, tusaale ahaan kuwa jum lada waxa ay bixiyaa $600 halka tafaariiq da bixiyaan $300, lacagta bixintuna waa qaabka dirista Mobilka.
TURKEY OO TIJAABIYEY GANTAALAHA S-400
Turkiga ayaa Jimcihii hawada u ganay gantaal meel u dhow xeebta Badda Ma dow ee Turkiga halkaas oo la filayay in mil itariga ay ku tijaabiyaan nidaamkooda dif aaca S-400 ee Ruushka uu sameeyay, si da ku cad muuqaal maxalli ah oo ay he shay wakaaladda wararka ee Reuters, kaa si keenay in digniin adag ay ka timaaddo Mareykanka.
Muuqaalkan oo laga soo duubay magaalada xeebta ku taal ee Sinop, ayaa muujinayay qiiq hawada isku share erayay. Maalmihii la soo dhaafay, Turkiga ayaa soo saaray ogeysiisyo xaddidaya ha wada iyo biyaha aagga xeebta ah si loogu oggolaado howlgalka tijaabada gantaalla han.
Sarkaal Mareykan ah oo aan magaci isa sheegin ayaa tilmaamay in Turkiga uu Jimcihii tijaabiyay nidaamka difaaca ee S-400 laakiin ma uusan bixin faahfaahin.
Tijaabooyinka S-400s, haddii la xaqiijiyo, waxa ay sababi karaan in ay sii kororto xiis adaha u dhexeeya Turkiga iyo Mareykan ka, oo si weyn uga soo horjeeday in Ank ara ay hubkan ka iibsato Moscow sababo la xiriira in hubkani uu wax u dhimayo nid aamyada difaaca ee isbahaysiga NATO.
Af-hayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibad da Mareykanka Morgan Ortagus ay aa she egtay in Mareykanku uu u muuji yey saraa kiisha ugu sarreeya ee dowlad da Turkiga in soo iibsashada nidaamyada milatari ee Ruushka sida S-400 ay tahay waxaan la aqbali karin, waxayna intaas ku dartay in Washington ay caddeysay raj jada ay ka qabto in nidaamkan gantaaluhu uusan hawlgalin.
"Haddii la xaqiijiyo, waxaan erayada u gu adag ku cambaareynaynaa tijaabada gantaalka S-400 oo ah mid aan la jaan qa adi karin masuuliyadaha Turkiga ee ka mid ahaanshaha xulafada NATO iyo saax iibka istiraatiijiga ah ee Mareykanka,” ayay hadalkeeda sii raacisay Ortagus.
GOOGLE OO SOO KORDHINEYSA ADEEGYO LA XIRIIRA DOORASHADA MAREYKANKA
Google ayaa Jimicihii ku dhawaaqday inay soo kordhineyso adeegyo cusub oo dadka Mareykanka ku nool ay ku heli kara an goobta ugu dhow ee uu cod-bixiyuhu codkiisa ka dhii ban karo doora shada dhow aan ka dhacey sa Marey kan ka.
Hannaankan ayey shirkaddu sheegtay in dadku ay ku qori donaan goobta wax la ga raadiyo ee Search Engine-ka iyo sidoo kale adeegga Google Voice Assistant.
"Hannaanka cusub ayaa cod-bixiyeya asha u sahli doona inay helaan meesha u gu dhow ee ay ka codeen karaan iyagoo adeegsan doona Search Engine iyo Goo gle Voice assistant” ayaa lgu yiri qoraal ka soo baxay Google.
Waxay sheegtay in adeegga Voice assistant uu cod-biyaha u sheegi doona xogta doorashada iyo meesha ugu dhow uu codkiisa ka dhiiban karo iyo waqtiga codeynta intaba.
RA’IISUL WASAARAHA NEW ZEALAND OO MARKALE DIB LOO DOORTAY
Xisbiga Shaqaalaha Bidix-Dhexe ee ay hoggaamiso Jacinda Ardern ayaa si aq labiyad leh ugu guuleystay doorashooyin ka guud ee dalka New Zealand kadib mar kii maanta oo Sabti ah la shaaciyay natiijada doo rashooyinka.
Codbixiyeyaasha dal ka New Zealand ayaa markale codkooda ku ab aalmariyay Jacinda ka dib qaabkii go’aan qaadashada laheyd ee ay u maareysay la dagaallanka cudurka safmarka ah ee Karoona Feyris.
Jacinda oo 40 jir ah ayaa soo dhisi do onta xukuumad hal xisbi ka kooban taas oo noqon doonta markii ugu horreysay ee Golaha Wasiirada New Zealand laga soo xulo hal xisbi muddo tobonnaan sano ah.
Jacinda ayaa muddo xileedkeedii hore waj ahday fashil ku aadan hirgelinta isbedel ladii ay ballan qaaday maadaama xisbige eda uu la wadaagayay dhismaha xukuum adda xisbiga kale oo wadani ah.
Xisbiga Shaqaalaha ayaa ku socda wa ddadii uu ugu guuleysan lahaa 64 kursi oo kamid ah 120 kursi ee uu ka koobanyahay baarlamaanka New Zealand, taas ayaana noqon doonta tiradii ugu badneyn ee uu hal xisbi ku guuleysto tan iyo markii ay New Zealand u guurtay nidaamka doora shada saamiga isu dheeli tiran 1996-kii.
DOWLADDA SHIINAHA OO MARAAKIIB DAG AAL IYO CIIDAMO KALA BAXAY BIYAHA SOO MAALIYA.
Dowladda Shiinaha ayaa qeyb ka mid ah maraakiibteeda dagaalka iyo ciidamo kala baxday biyaha Soomaaliya iyo Gacan ka Cadmeed.
Ciidamadaas iyo marakiibtooda dagaal ka ayaa 14-kii bishan dib ugu laabtay magaalada dekedda leh ee Zhoushan ee bariga gobolka Zhejiang.
Kooxda howlaha badda ee Shiinaha ee magaceeda loo soo gaabiyo (PLA) ay aa dhameysatay muddada loogu talagalay howl-galka, iyaga oo galbin jiray maraakiib ta rayidka ah ee Shiinaha iyo kuwa kale ee ajaaniibta.
Sidoo kale kooxdan isaga baxday biy aha Soomaaliya ayaa ka koobneyd burbur iye, hage gantaalaha Taiyuan, maraakiibta gantaalaha Jingzhou iyo markabka sahayda ee Chaohu.
NIN AFLAGAADEEYEY NEBI MUXAMED NNKH OO LAGU GOWRACAY DALKA FARANSI ISKA
Macallin Iskuul oo dhiga maadada Taar iikhda ayaa lagu gowracay magaalo ku taa lla dalka Faransiiska Jimcihii, maalmo ka dib markii uu aflgaadeeyey Nebi Muxamed SCW, sida uu xaqiijiyey madaxweyne Emmanule Macron.
Weerarkan ayaa waxaa fuliyey 18 jir muslim ah oo asal ahaan kasoo jeeda gob olka Jamhuuriyadda Chechnya ee Ruushka.
Macallinka la gowracay, oo lagu mag acaabay Samuel Paty, ayaa la sheegay in uu ardaydiisa dhowaan usoo bandhigay sawir gacmeed lagu muujinayey Rasuulka SCW, isaga oo ku cayaaraya oo aflagaa deenaya.
Wiilka weerarka fuliyey oo aan weli ma gaciisa la shaacin ayaa waxaa kadib too gasho ku dilay booliska, kadib markii uu qoorta ka gooyey Samuel.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanule Macron oo booqday waddada uu weerar ka ka dhacay ee qoorta looga gooyey Sa muel Paty ayaa weerarka ku qeexay "mid fuleynimo ah,” wuxuuna yiri "Samuel waxa uu dhibane u ahaa weerar argagixiso Isla ami ah.”
"Mid ka mid ah muwaadiniinteena ay aa la dilay maanta sababtoo ah waxa uu dadka bari jiray xoriyadda hadalka, iyo xor iyadda iyo wax la rumeeyo ama aan la ru meyn,” ayuu yiri Macron.
Macallinka la dilay ee Samuel Paty ay aa hanjabaado isdaba joog ah la kulm ayey tan iyo markii uu furay dood la xiriirta sawir gacmeedka 10 maalmood ka hor.
PETER STRZOK: NINKA FBI KA TIRSANAA EE TRUMP NECEBYAHA
Strzok waxa shaqada FBI laga eryey markii ay caddaatay inuu si shakhsi ah u necebyahay Trump Bishii Jeeniweri 2007, Peter Strzok wuxuu dhex fadhiyey qol ku yaal xarunta FBI oo wuxuu ka qa yb galayey dood lagu gaadhay go'aan laga qaatay arin ku cusbayd. Waxay arintu ahayd baadhintaan ma lagu bilaabi karaa ninka haatan uun loo caleemo saaray madaxtinimada Maraykanka?
Waxa taagnaa su'aalo adag oo ahaa sharciga talaabadani ma waaf aqsantahay, yaa ansixiya in baadhitaan noocaas ah la bilaabi karo? Laakiin waxa sidoo kale muuqday arimo cad oo aan la dhaafi karin, ayuu yidhi Strzok oo BBC-da la hadlay.
"Waxaan u jeedaa sidee ayaad baadhitaan ugu bilaabi kartaa qof dalka madaxweyne ka ah? Sababta oo ah xataa baabuurta ilaala diisa ma raaci kartid iska daa diyaaradda madaxweynahee. Si qars oodi ah kuma gali karti xafiiska madaxweynaha ee Oval Office oo iskama dhigi kartid qof xashiishka ka soo qaadaya."
Trump oo masraxa dib ugu soo laabtay balse yaa hogaaminaya doo rashada?
Maxay tahay shaqada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya?
Baadhitaanku waabu socday dhawr bilood oo Trump olole ku jiray Strzok na waxaa la siiyey magac af-garasho oo ah eray laga soo qaatay heesta ay qaadaan kooxda Rolling Stones ee la yidhaa Jumpin' Jack Flash oo ah Crossfire Hurricane.
Ololaha Trump waxa baadhitaanka lagu bilaabay 2016 markii warbixin ka timid London oo ahayd in danjiraha Australia uu kula kulmay qof la taliye u ah Trump goob khamriga lagu cabo oo magaa ladaas ku taal kuna yidhi sida la sheegay in Ruushku danaynayo inuu la shaqeeyo oo uu siiyo xog dhaawici karta sumcadda Hillary Clinton.
Strzok waxa xadidayey sharciga FBI ee ku saabsan hubsiinaha ama faaqidaada doorka UK ama socdaalka uu ku tago karo dalka as. Arin kale ayaa jirtay oo UK aad uga welwelsanayd taas oo ah in ay dhici karto in lagu shaabadeeeyo in ay faraha la gasho arin Mar aykanka u gaar ah.
Badhatamihii bishii Sebtember ayaa FBI waxay heshay warar tax ane ahaa oo uu diyaariyey sarkaal ka tirsan sirdoonka Ingiriiska ee MI6 oo l ayidhaa Chris Steele, kuwaas oo mar kale tibaaxay in uu jiro xidhiidh qarsoodi ah oo ka dhexeeya ololaha Trump iyo Moscow.
"Run ahaantii wararkaasi wax badan bay sii cadeeyeen oo ah arimo badan oo ah kuwii aanu tuhunsanayn" ayuu yidhi Strzok. "Waxa dhi ci karta in dulucda arintaasi sax ahayd ama aanay sax ahayn ama aanaan anagu garan karayn. Laakiin guud ahaan sida xogtu wax u tibaaxaysay waxay ahayd wax is haysta oo waafaqsan sidii aan ana guba u haysanay". Warka Steele ma ahayn xogta keliya ee lagu sal aynayey doodaa taagnayd Jeeniweri ee ahayd in baadhitaan lagu bilaabo madaxweynaha qudhiisa (arintaas oo Strzok laftiisu ka soo horjeeday) laakiin arinta warkaasi abuuray ee ah suurtogalnimad ah in Moscow hayso xog lagu eedayn karo Donald Trump ayaa aad u soo shaac baxday doorashadii ka dib.
"Intaad fadhiisato ayaad isku dayeysaa in aad qiimayso xaddiga halistu inta uu leegyahay" ayuu Strzok ku yidhi BBC. "Ta ugu xumi na waxay noqonaysaa in arinta madaxda sare wadeen oo Donald Trump ahaa mushrax daba dhilif ah uu qudhiisu aha basaas uu qo rtay Kremlin-ku oo u shaqaynayey. Markaa u malayn maayo in mid kaayona ay ku soo dhacday in arintaasi suurto gal tahay laakiin se aanaan meesha ka saari karin arintaas u qaadan waaga ah.
Waxwalba oo aad u baahan tahay in aad ka ogaato doorashada MareykankaArinta kale ee suurto galka ahi waxay ahayd in dadka isku xidhayey Moscow iyo ololaha Trump aanay feejignayn, ama si da uu u yidhi Strzok ahaayeen "shakhsiyaad danaystayaal ah oo aan khibrad lahayn oo doonayey in ay meesha lacag ka helaan" oo la xidhiidhayey koox Moscow fadhida oo aan qudhoodu aragti qee xan lahayn oo iyaguna doonaya inay lacag helaan. Haatan wuxuu rumaysan yahay in uu runtii ku soo dhawaaday.
Magaca buugga xusuus qorka Strzok waxaa la yidhaa Compromi sed waxaanu weli rumaysan yahay in Moscow si uun sir uga hayso Donald Trump.
"Markaad eegto Trump waxaa kaaga muuqanaya inuu leeyahay dhamaan sifooyinka qof dal kale ugu adeegi karo" ayuu yidhi Strzok, waaanu farta ku fiiqay xidhiidhka ganacsi, siduu u jecelyahay hoga amiyeyaasha awoodda badan iyo qabka qudhiisa ku jira ee uu aami nsanyahay in Moscow ay siin karto wax uu u baahan yahay.
"Waxaan rumaysnahay inuu jiro qaab lagu khiyaameeyey. Waa nad ogtahay oo waxaan rumaysanahay in arintaasi tahay wax la rumaysan karo".
Strzok wuxuu ku takhasusay ka hortagga sirdoonka Ruushka, waxaanu tabobar ku qaatay qaab baadhitaanno ay dejisay FBI oo la gu saleeyey dabogalka basaasiinta aadka isku qariya ee Ruushka.
Wuxuu tabaradaa ku bartay in Ruushku adeegsado hab qoto dheer oo samir badan oo sidoo kalena ay wadaan siyaasiyiin, ganacsato iyo arday ay u sahlan tahay in ay sirdoonka dalalka kale dhexgalaan oo ay xataa mararka qaar adeegsadaan maafiyada. "Waa hab aad u kakan oo ay isku maranyihiin awoodda taas oo ka dhigta wax aan la fahmi karin iyo sidoo kale in aan la beegsan karin.
Strozk oo xirfadiisu ahayd in aanu is muujin ayaa haatan duruuftu ku kaliftay inuu noqdo shakhsiyad la wada garanayo oo lagu kala ar agti duwayn yahay. Madaxweyne Trump ayaa dhawaan ku sheegay inuu "cambaar" ku yahay dalka, eraygaas oo uu dhawr goor oo hor ena ku sifeeyey. Fariimo qoraal ah oo ay is weydaarsadeen isaga iyo qareen ka tirsan FBI oo xidhiidh caashaq ka dhexeeyey ayaa se muujiyey in uu nacayb shakhsi ah u qabo Donald Trump, waxaana ka mid ahaa fariimahaas mid uu ku sheegay in uu 2016-kii isku dayey in Trump la baadho. Markii fariimahaa qoraalka ahi soo bax een ayaana shaqadii FBI laga eryey.
Strozk wuxuu ku nuuxnuuxsaday in aragtidiisa shakhsiga ah ee uu ka qabo Trump aanay haba yaraateen saamaynin shaqadiisa oo sharciga ka indho saabin. "Qof kasta oo ka tirsan FBI wuxuu lee yahay aragti siyaasadeed oo uu aaminsanyahay, waayo aragnima daydu waa 20 sano iyo dheraad qof kastaa aragtida isaga u gaarka ah wuxuu kaga tagaa albaabka xafiiska laga galo" ayuu ku dooday. Laakiin Strzok waxa ku hal qabsada dadka taageersan doodda Tru mp ee ah in "sir doonka dalku" khiyaameeyey oo uu doonayey inuu fashiliyo ololihiisii uu ku guulaystay
Strzok wuxuu rumaysan yahay in farogelintii Ruushku saamayn weyn ku lahayd natiijadii ka soo baxday doorashadii 2016 waxaanu qirayaa in sirdoonka dalku ku fashilmay in ay fahmaan sida Ruush ku u adeegsado baraha bulshadu ku xidhiidho ee internet-ka ee uu ku gaadho ujeedooyinkiisa siyaasadeed ee farogelinta dalalka kale.
Waxa dhici karta in ay doonayeen in Hillary Clinton ku guulays ato doorashadaa oo ay qorshaynayeen in ay markaa dhaawacaan sharciyadda hanaanka doorashada laakiin markii dambe qorshahaa way ka noqdeen markii Trump guulaystay. Haatanna waxa uu ruma ysan yahay in Ruushku aanu gacmaha laaban doonin sidaa awgeed na uu u baqayo dimuqraadiyaddii Maraykanka "walaaca aan haatan qabaa waa mid aan noloshayda i soo marin".